'मनका धनी' गरिब पिता, छोरी बचाउन हेलिकोप्टर मगाउँदै भने- ज्यानभन्दा ठूलो त पैसा होइन नि!
विष्णु नेपाल/ज्ञानेन्द्र न्यौपाने
धुन्चे- चप्पल फाटेर प्वाल परेका छन्। शरीर ढाकेको कपडा ठाउँ-ठाउँमा उध्रिएका छन्। टोपीदेखि पैतालासम्मका कपडा धुलाम्मे छन्– सुपा तामाङका।
चरम गरिबीको स्पष्ट झल्को शरीर ढाक्ने लुगाले दिइरहेको थियो। तर, ४८ वर्षीय सुपाले सन्तानप्रति पोखेको माया, ममता र वात्सल्य समाजका लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।
उनले यहाँस्थित जिल्ला अस्पतालको शय्यामा मृत्युसँग जुधिरहेकी आफ्नी सुत्केरी छोरी र नवजात शिशुलाई थप उपचार गर्न निजी खर्चमा काठमाडौंबाट हेलिकप्टर मगाए। उदाहरणीय र अनुकरणीय बाबुको कर्तव्य पालना गर्न उनी चुकेनन्।
अस्पताल परिसरमा टहलिँदै आकाशमा कुन बेला हेलिकप्टर देखिन्छ भनेर गोसाइँकुण्ड हिमशृङ्खलातर्फ हेरिरहेका पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका गोल्जुङ–१ निवासी ४८ वर्षीय सुपाले गहभरि आँसु पार्दै भने, 'डाक्टरले जति छिटो हुन्छ, आमा—शिशुलाई काठमाडौं पुर्याेउनुहोस्, आमा-शिशु दुवैको जीवन खतरामा छ, शिशुको त झन् बढी खतरामा छ, हामीले गर्नसक्ने जति उपचार यहाँ गरिसक्यौं भन्नुभएको छ।'
'अस्पतालको ढोकामा झुन्ड्याइएका एम्बुलेन्सका चालकहरुको नम्बरमा कुनैसित पनि सम्पर्क भएन। एम्बुलेन्स पाइएन। हेलिकोप्टर नै मगाउनुपर्योक। ज्यानभन्दा ठूलो त पैसा होइन नि! छोरी र नाति बाँचे भने त सके तिर्लान्। नसके जसो होला-होला जस्तो लाग्यो। अलिकति पाटा (जमिन) थियो, लालपुर्जा राखिदिन्छु भनेर ऋण लिएर हेलिकोप्टरका लागि पैसाको जोहो गरेँ।' उनले मलिन हुँदै भने।
दुई छोरी र दुई छोराका पिता सुपाकी जेठी छोरी दावा ग्याल्मो घले सात महिनाको गर्भवती अवस्थामा एक्कासी रक्तस्राव हुन थालेपछि नजिकको गोल्जुङ स्वास्थ्य चौकीमा पुगेकी थिइन्।
'स्वास्थ्यकर्मीले तुरुन्त धुन्चेस्थित जिल्ला अस्पतालमा लैजानुस् भने। बाटोमा ल्याउँदा बाटोमा झन् खुन गयो', अस्पतालको मूलढोकामा नै झरेको रगत देखाउँदै दावाका पति कर्मा तामाङले भने।
यहाँस्थित १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रियाद्वारा बच्चा जन्माउने जनशक्ति र आइसियू समेत छैन।
'हामीकहाँ ल्याइपुर्‍याउँदा बिरामीको निरन्तर रगत गइरहेको थियो। सबै परीक्षण गर्दा आमा र पेटभित्रको शिशुको अवस्था सामान्य थिएन। रगत रोक्ने काम गरेँ। रगत बग्न रोकिएपछि बच्चा सकुशल कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर आफूले अध्ययन गरेका सबै चिकित्सकीय ज्ञानलाई प्रयोग गरेँ। करिब तीन घन्टाको अथक प्रयासछि शल्यक्रियाबिना पेटभित्रबाट शिशु निकालेँ। सुत्केरी हुन दिन पुगेकै थिएन। शिशुको तौल कम थियो। थप उपचार सेवा दिने उपकरण, विशेषज्ञ र दक्ष चिकित्सक तथा रक्तसञ्चार सेवासमेत नभएकाले काठमाडौँ रिफर गरेँ', चिकित्सक नितुकुमारी झाले भनिन्।
हेलिकोप्टर मगाउन सहजीकरण गर्नुभएका यहाँका ज्येष्ठ सञ्चारकर्मी ज्ञानेन्द्र न्यौपानेले भने, 'बिहान-बेलुकी छाक टार्न समेत मुस्किल पर्ने सुपाले छोरीको थप उपचार गर्न देखाएको तत्परता र माया अनुकरणीय छ। साथमा नगद पैसा नभए पनि उहाँको बोली र व्यवहारले मैले हेलिकोप्टर तत्काल झिकाउन सहजीकरण गरिदिएँ।'
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चिकित्सक गुणनिधि शर्माका अनुसार, अझै ७५ प्रतिशत गर्भवती आमा घरमा नै सुत्केरी हुन्छन् भने २५ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदै आएका छन्।
बर्सेनि करिब नौ सय देखि एक हजार गर्भवती हुने आमामध्ये करिब २ सय ५० ले मात्र जिल्लाभर रहेका १३ वटा बर्थिङ सेन्टरबाट गत वर्ष सेवा लिएका थिए। अर्कोतर्फ जिल्ला अस्पतालमा गत वर्ष ६२ गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माएका थिए। गर्भवती सबै आमालाई स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी हुन ल्याउन स्थानीय तह मार्फत अभियान सुरु भएको उनले जानकारी दिए। (रासस)